Sida loo isticmaalo iyo badbaadin dukumentiyada in iCloud
Iyada oo la sii daayo mid iCloud uma baahna in ay sii waraaqihiisa in uu laptop ama folder computer iyo files. Ma aha wax laga walwalo, halkaas oo aad u badbaadiseen aad dukumentigan oo sii dambe baadi. Codsiyada taageera dokumentiga kaydinta iCloud, qof u baahan yahay in la xasuusto kaliya app ah oo laga furay faylasha sida. Inta kale ee wax loo maamuli lahaa by iCloud, wuu hayn lahaa raad-raacaan isbeddellada ku badbaadiyey ee dokumentigan ka dibna qalab kasta oo qortey in la xisaabtaada noqon lahaa farriimaha helo. iCloud ayaa awood u leh in uu badbaadiyo sanamyadiinna, PDFs, barasantigareeyaan, bandhigyo iyo nooc kala duwan ee waraaqaha. Warqadahaasi waxay ka dibna waxaa laga heli karaa mid ka mid ah qalabka macruufka. Waxaa u shaqeeya macruufka 9 ama kombiyuutarada Mac sidoo kaas oo ay leeyihiin OS X El Capitan iyo kombiyuutarada isagoo daaqadaha iyo sidoo. In ay wax walba iCloud Drive uu abaabulay galalka, sida kaliya ee computer Mac ah. Fayl yar ayaa la sameeyey si toos ah u Chine oo taageeri iCloud Drive u barnaamijyadooda iWork (Pages, Numbers, oo taabanaysa isu-diridda).
Sidee si ay awood waraaqaha ee iCloud ku saabsan qalabka macruufka aad
Si on gurmad dukumentiyada aad iPhone, iPad iPod ama si fudud u raac talaabooyinka hoos ku qoran:
1. aad iPad ama iPhone tag screen guriga iyo ka jaftaa " Settings ";
2. Hadda ka jaftaa " iCloud ";
3. Tubada Documents & Data ;
4. In loo sahlo ikhtiyaarka oo sheegay in Documents & Xogta ku taala hogaanka;
5. Halkan, waxaad fursad u haysataa in awood oo Chine samayn kartaa raad raac ah oo xogta iyo dokumentiyada ku daruur, sida kor ku cad.
Sidee si ay awood waraaqaha ee iCloud ku computer Mac ah.
Tani waxaa loo aqoonsan yahay update muhiim ah oo diyaar u ah labada Documents iyo Data. Marka aad naftaada u cusboonaysiiso si iCloud Drive qalabka Mac ah, macluumaadka iyo dukumentiyada aad si toos ah u soo guuriyeen in iCloud Drive oo ay ka dibna waxaa laga heli karaa qalab ah oo ay leeyihiin iCloud Drive. Si aad u isticmaasho habkaani on your computer Mac, raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
1. Riix Apple ka dibna riix rabtid System
2. Laga waxaa guji iCloud
3. In loo sahlo iCloud Drive ah
Halkan waxaa lagaa codsan doonaa in ay ku heshiiyaan oo ay xaqiijinayaan in aad diyaar u tahay in aad cusboonaysiiso account iCloud in iCloud Drive ka Documents iyo Data yihiin, oo in karti loo lahaa.
Haddii aad tahay user iOS9 ah, waxa kale oo aad u cusboonaynta kartaa waraaqaha ku iCloud in iCloud Drive. iCloud Drive waa Apple ee xal cusub ee dokumentiga kaydinta iyo .Wadashaqayntaas. Iyadoo iCloud Drive, aad si nabad ah ku badbaadin karto, edit iyo wadaagno bandhigyo, speadsheets, sawirada, iwm in iCloud oo ku helaan iyaga oo dhan, idevices.
Sahlo iCloud Drive on qalabka macruufka.
1. Tubada on Settings on iPhonse ama iPad macruufka aad orodka 9 ama ka dib.
2. Tubada on iCloud.
3. Tubada on iCloud Drive in ay soo jeedin ku saabsan adeegga iCloud Drive.
Sahlo iCloud Drive on Yosemite Mac.
iCloud Drive yimaado oo ay la socdaan cusub OS Yosemite. Tix System Open aad Mac, guji iCloud Drive ee guddiga bidix si ay u noqon on. Waxaad sidoo kale riixi kartaa Options inay arkaan wixii xog App, waxaa lagu keydinayaa si iCloud Drive.
Fiiro gaar ah : iCloud Drive kaliya la shaqeeya macruufka 9 iyo OS X El Capitan. Haddii aad weli qalabka socda macruufka ka weyn ama qoraalkii OS, waxaad u baahan tahay laba jeer fikir inta lagu casriyeeyo si iCloud Drive, haddii kale waxaad la kulmi doonaa arrimaha hagaagsan waraaqaha aad ku dhammaan qalabka Apple.
> Resource > iCloud > Sida loo Isticmaalo iyo Save Documents in iCloud